トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira aiming munhu billboard muenzaniso nepachinko yaiitirwa
Signboard yokutevedzera, ndinoda kutamba zvikuru vatengi vari nepachinko yokumusoro, 's vanotaurwa chigadzirwa. Signboard yokutevedzera, asi zvakasiyana ne mumwe chitoro, isu kazhinji pane mienzaniso yakawanda yakakurumbira refu-vamire dzakatevedzana. Achitaura sei, akakurumbira akatevedzana chinobuda Xintai kubva pedyo chinotevera. The muenzaniso iwoyo series, kana zvikuru Tsukaere somunhu centerpiece womuenzaniso, chitoro ichi ndechokuti muenzaniso uyu chinowanzoitika kusika akasimba uye mufananidzo.
Naizvozvo, ndinoda kutora Kutarira zvakanakira nekuipira yakarova nguva dzose chiratidzo yokutevedzera chero nepachinko parlors.
sezvo makomborero, ndiko kuti akatsiga zvachose. Akanyanya chipikiri kuchinja uye Horukon ezvinhu, Ndinofunga pfungwa vaparidzi kuti achiri kugadzikana. Signboard yokutevedzera, nokuti chiratidzo rakasikwa mumigwagwa chitoro mufananidzo zita raro, muenzaniso kuti handigoni nyore kana kuti yose tafura kuti apore machine. Zvikurukuru kana regulars kune kusaina yokutevedzera, katsika kwakadaro kuchava nesimba.
chipikiri kugadziridzwa zvinogoneka kuti akatsiga, sezvo rotational kumhanya, Somuenzaniso zviuru Yen iri wakatsiga nguva dzose, ari nyore segwapa ane mwero mari, ndechokuti kurwisana date vaifarira inogona. Avhareji kumativi, matunhu nokugaramo billboard yokutevedzera ose zuva, vave nokukurumidza convergence pamusoro pa, zvikuru yakarohwa sezvingatarisirwa paavhareji. The zvakawanda data, saka anogona kushandiswa senzira kutsunga zvinhu kuverenga sefungu Horukon uye ROM kurwa kuchavapo munzvimbo asingatani.
Uyezve, sezvo billboard mienzaniso kazhinji nepachinko yokumusoro kuti yakatoiswa zvakawanda nhamba, ndezvokuti mbambo kuchinja yose tafura ose zuva, zvichava nguva zvisingabviri. Kana pane Horukon akaisawo Hanemono kugadziridza bhora kunze chipikiri kugadziridzwa, nyaya nhamba huru zvitoro riri guru, ipapo somumwe nzira iyoyo chokunyora chinangwa.
kuvamirira dziri yatovapo, kutaura zvazviri, chaizvo kusaina yokutevedzera, kugara kunowandawo, ndiko kuti asunga pechikuva chakaoma. Regulars, uchazova tishanyire zvainanga panguva billboard muenzaniso muchitoro. Munhu wese, raiva pamberi rakarova aunganidza vari regulars kusaina yokutevedzera Ndinofunga pane.
nokuti, nepachinko chitoro regulars muri pamwe yakawanda, urongwa yaivapo hwomukova wakanaka, chete nemasaini muenzaniso kubva mangwanani kuva mamiriro ezvinhu dzakakwirira nokugaramo. Wave akanaka tafura paminiti billboard womuenzaniso kuti haufaniri kugara pasi kupinda imwe mangwanani. Takaedza kuwedzera kubatsira uye zvazvakashatira billboard womuenzaniso, nani makomborero, paavhareji, kazhinji, achava chiratidzo muenzaniso. Kana iwe vakarasikirwa pamusoro womuenzaniso akasarudzwa, kungava kuchenjera zviri kuedza kuti varove munhu billboard muenzaniso.